I-American Revolution - i-1763 kuya ku-1789
Izincwadi zeMelika Revolution
Amamephu womqondo we-American Revolution
I-American Revolution esetshenziswayo #1
I-American Revolution esetshenziswayo #2
I-American Revolution esetshenziswayo #3
I-American Revolution esetshenziswayo #4
I-American Revolution esetshenziswayo #5
I-American Revolution esetshenziswayo #6
I-American Revolution esetshenziswayo #7
Imibhalo eyisihlubuki yaseMelika
Imibhalo yaseMelika Yokuvuselela
Imibuzo yase-American Revolution eseyi
Ihluzo zeMelika Revolution
Izazi-mlando zaseMelika Revolution
Imibuzo ye-American Revolution #1
Imibuzo ye-American Revolution #2
Imibuzo ye-American Revolution #3
Imibuzo ye-American Revolution #4
Imibuzo ye-American Revolution #5
Imibuzo ye-American Revolution #6
Quizzes American Revolution
Izingcaphuno zeMelika Revolution
Izikhathi zesikhathi zeMelika Revolution
Izihloko zeMelika Revolution
I-American Revolution ubani
Igama elithi American Revolution elithisearch - imiqondo
Igama elithi American Revolution elithisearch - imicimbi
Igama elithi American Revolution elithisearch - abantu
I-American Revolution izwisearch - izindawo
American Revolution amazwi
The I-American Revolution kwaqala maphakathi ne-1760s njengokuhlubuka kwamakoloni aseBrithani ayehlala ngasolwandle olusenyakatho Melika. Iphele e-1789 ngokwakhiwa kwesizwe esisha, kwesekwa ngumthethosisekelo obhaliwe kanye nohlelo olusha lukahulumeni.
I-American Revolution yaba nomthelela omkhulu emlandweni wanamuhla. Kuphikise futhi kubukela phansi amandla angenakuphikiswa wezindela zaseYurophu. Ingene esikhundleni sobukhosi baseBrithani nohulumeni osebenzayo osuselwa emigomeni yokuKhanyiselwa ye-republicanism, ubukhosi obuthandwayo kanye nokwehlukaniswa kwamandla.
I-American Revolution ikhombisile ukuthi ukuvukela kungaphumelela nokuthi abantu abajwayelekile bangazibusa. Imibono yayo kanye nezibonelo zayo kugqugquzele i-French Revolution (1789) kanye nokunyakaza ngokuzimela nobuzimele. Okuphawuleka kakhulu ukuthi, i-American Revolution yazala iMelika, izwe elinamagugu ezepolitiki, amandla ezomnotho kanye namandla ezempi asungule futhi achaza umhlaba wanamuhla.
Indaba ye-American Revolution ingenye yezinguquko ezisheshayo nentuthuko. Ngaphambi kwama-1760s, amakoloni ama-13 aseMelika ajabulele amashumi eminyaka ukuchuma kwezomnotho kanye nobudlelwano obuhle neBrithani. Iningi labantu baseMelika lazithatha njengabathembekile abangamaBritane; babenelise ukuba yizikhonzi zenkosi yaseBrithani ehlakaniphile nenomusa kunezigqila nezifo zombushiqela wakwamanye amazwe. Ukuthi uguquko lungenzeka emphakathini wobukoloni baseMelika kwabonakala kuyinto engacabangeki.
Ngesikhathi seminyaka yama-1760s, lokhu kuthembeka eBrithani kwavivinywa yinkinga ebonakala ingenangqondo: ukungavumelani kanye nezinkulumompikiswano ngezinqubomgomo zikahulumeni nentela. Kungakapheli iminyaka eyishumi, abalimi baseMelika behlome ngomkhonto nangama-pitchforks futhi belwa namabutho amaBrithani eLexington, Massachusetts. Maphakathi ne-1776, osopolitiki baseMelika babheka izibopho neBrithani njengephuke ngokungenakulungiswa kangangokuba bavotela inkululeko. Le nkululeko yaletha izinselelo ezimbili: impi neBrithani, amandla ezempi aphambili emhlabeni, nesidingo sohlelo olusha lukahulumeni. Ukuhlangabezana nalezi zinselelo kwakuphawula isigaba sokugcina seMelika Revolution.
Iwebhusayithi ye-Alfa American American Revolution iqukethe imithombo eyikhulu nesisekelo ukukusiza uqonde imicimbi eseMelika phakathi kwe1763 ne1789. Esethu amakhasi esihloko, ebhalwe ngothisha abanesipiliyoni nezomlando, banikeza ngamafinyezo amafushane wemicimbi ebalulekile nezinkinga. Asekelwa ngezinto ezibonakalayo ezifana izikhathi, glossaries, amaphrofayli omlando, amamephu emiqondo, izingcaphuno, umlando namaphrofayili wokuvelela izazi-mlando. Iwebhusayithi yethu futhi iqukethe uhla lwezinto ezenziwa online ezifana emaphazili kanye nokuzikhethela okuningi kwakha, lapho ungavivinya futhi uvuselele ukuqonda kwakho kweMelika ekuguqukeni.
Ngaphandle kwemithombo eyinhloko, konke okuqukethwe kule webhusayithi © I-Alpha History 2015-19. Lokhu okuqukethwe akunakukopishwa, kuphinde kushicilelwe kabusha noma kusatshalaliswe kabusha ngaphandle kwemvume ebonakalayo yomlando we-Alfa. Ngemininingwane engaphezulu ngokusetshenziswa kwewebhusayithi ye-Alfa's History nokuqukethwe, sicela ubheke kithi Imigomo Yokusebenzisa.
1765 ukuze 1773
1774 ukuze 1776
1777 ukuze 1783
I-1784 nangale kwalokho
Mayelana nale sayithi:
I-American Revolution iqukethe izindatshana, imithombo kanye nemibono emicimbini eseMelika phakathi kwe1763 ne1789. Lesi siza sakhiwa futhi sagcinwa ngumlando we-Alpha futhi siqukethe amagama we-100,000 kumakhasi we-200. Ngeminye imininingwane, vakashela eyethu Ikhasi le-FAQ or Imigomo Yokusebenzisa.